गुप्तचर - सल्यानमा बाढीले माइक्रोबस बगायो, यात्रु हाम फालेर जोगिए !
सल्यानमा बाढीले माइक्रोबस बगायो, यात्रु हाम फालेर जोगिए !
सल्यान । सल्यानको बनगाड खोलाको बाढीले माइक्रो बस बगाएको छ । छिन्चु जाजरकोट सडकखण्ड अन्तर्गत खोला पार गर्दागर्दै बाढीले माइक्रोबस बगाएको हो । खोलामा भासिएपछि माइक्रोबाट यात्रुले हाम फालेर ज्यान जोगाएका थिए । जाजरकोटबाट नेपालगञ्जका लागि छुटेको हाइस माइक्रोलाई बाढीले बगाएको हो । खोलामा यसअघि नै निर्माण भइरहेको पुल बगेको थियो । समयमै पुल निर्माणको काम नसकिँदा बाढीले बगाएको हो । बगाएको स्थानीय बताउँछन् । लामा कन्सट्रक्स कम्पनीले पुल निर्माणको जिम्मा पाएको छ । पुल नभएपछि वर्षायाममा आवतजावत गर्न समस्या परेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
प्रहरीलाई सलाम ! अपहरणमा परेको ९ घण्टापछि ५ बर्षीय बालकको सकुशल उद्धार
धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६ बाट अपहरणमा परेका पाँच वर्षका छेमाङ चौधरीको प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ । सोमबार बिहान करीब ८ बजे कैलारी गाउँपालिकाको आदर्श माध्यमिक विद्यालयको परिसरबाट अपहरणमा परेका बालक चौधरीलाई सोही जिल्लाको भालुवाङबाट साँझ सकुशल उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए । अपहरणमा संलग्न कैलालीको गोदावरी नगरपालिका लालपुर गाउँका बिर्जु चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
मानवतस्करीको ‘ट्रान्जिट’ बन्दै दिल्ली, १६ महिलाको उद्धार
बाँके । अवैध रूपमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जान लागेका १६ नेपाली महिलालाई भारतको नयाँदिल्लीबाट नेपाल फर्काइएको छ । खाडी मुलुक जान लागेका ती महिलालाई नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा भारतीय महिला आयोग, बनारस प्रहरी तथा रेस्क्यु फाउन्डेशन नामक संस्थाको सहयोगमा उद्धार गरिएको माइती नेपाल नेपालगञ्ज शाखाका संयोजक केशव कोइरालाले जानकारी दिए । उनीहरूलाई भारतीय बाटो हुँदै अवैध रूपमा खाडी मुलक लैजान लागेको गोप्य सूचनाका आधारमा उद्धार गर्न सफल भएको उहाँले कोइरालाले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
निजामति अस्पताल भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै
काठमाडौँ । निजामति अस्पताल (civil service hospital ) भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको स्रोतले जनाएको छ । अहिले सो अस्पतालमा उपचार गराउन पुग्नेहरुको संख्या थेगिनसक्नु भएको पाइएको छ । बिहान ३–४ बजेदेखि नै टिकट लिनको लागि बिरामीहरु लाइन लागिरहेको भेट्न सकिन्छ । अस्पताल प्रशासनले यस विषयमा उचित ध्यान पु(¥याउन नसक्दा पहुँचवाला बिरामीले मात्र उक्त अस्पतालमा उपचार गराउने सौभाग्य पाउने गरेको टिकटको लाइनमा बसेका बिरामीहरु बताउँछन् ।	थप पढ्नुहोस्
नक्कली नेपाली रुपैयाँ बनाउने दुई भारतीय पक्राउ
२८ पुस, काठमाडौं । प्रहरीको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–६ स्थित नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्रमा नक्कली नेपाली नोट बनाइरहेका दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । बिहीबार राति विशेष सुराकीका आधारमा बेलौरीको दशगजा क्षेत्रमा खटिएको ब्यूरोको टोलीले नेपाली रु एक हजारको नक्कली नोट बनाइरहेको अवस्थामा भारतको पिलिभित जिल्ला सारतपुरी बलाह बजारघाटका २२ वर्षीय बलवीर सिंह र १९ वर्षीय कृष्ण सिंहलाई पक्राउ गरेको क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी सहायक निरीक्षक केशव जोशीले जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्